နန်းသီရိလွင်| January 3, 2013 | Hits:5,823
| | ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာတွင် ပြုလုပ်သော ABSDF ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ရန်ကုန် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ အပြီးသတ် သဘောတူညီချက်တွေ ရနိုင်မလားမြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပါဝင်ခွင့်ရရေး လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆိုအဖွဲ့ခွဲ တည်ထောင်တဲ့ ရဲဘော် နှစ်ဦး ABSDF က ထုတ်ပယ်KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာချုပ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံဦးအောင်မင်းနှင့် KIA တွေ့ဆုံပွဲ စစ်တပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ မတက်
မင်းကြီးညို January 4, 2013 - 12:12 am ABSDF အဖွဲ့ဟာ ကေအင်ယူနယ်မြေမှာ ရှိစဉ်ကာလမှာလည်း ကေအင်ယူနဲ့ပေါင်းပြီး အစိုးရ
Reply Shwe Yoe January 5, 2013 - 3:15 am The truth will set you free at last, my man.
Reply Wai lin January 4, 2013 - 6:27 am All reasons are rubbish. No points. Meaning less.
Reply moejoo January 8, 2013 - 10:47 am i agree with u.what for ABSDF???????thinking rightly.
Reply Salai Lian January 4, 2013 - 9:00 am Well! The Thein Sein administration is waging war against the Union. War in the north does not mean just war against the Kachins. Burmese students also are there. Chins, Rakhines, Karens, Was, Shans and Mons are also there with the Kachins. These peoples of the Union strongly believe in democracy and federalism which Ne Win, Than Shwe and Thein Sein hate bitterly. Thein Sein is justafake leader who will never try to achieve what we all have been asking for the last six decades. We must not trust Thein Sein’s lip-service. He cannot even control his own soldiers. There is no way Thein Sein will lead us successfully into genuine democratic society. Therefore, we all need to keep fighting until the new dawn called democratic Union is instituted in our mother’s land.
Reply ဂျောက်ဂျက် January 4, 2013 - 6:00 pm ABSDF အဖွဲ့တောင် KIA ဘက်ကနေ ကူတိုက်ပေးနေတယ်။ ကချင်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဦးခက်ထိန်နန်၊ ဒေါ်ဘောက်ကျာ တို့ကော ဘာလုပ်နေတာလဲ။ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ သွားပြီး စာရင်းပေးနေကြတာလား၊ စစ်ဖြစ်ရင် နေရာကြိုရအောင်လုပ်နေတာလား။ ကိုယ်ကချင် အချင်းချင်း ဒီလောက်ဖြစ်နေတာတောင် နေနိုင်တယ်နော်။ တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်တုန်း ကြတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ဘာတွေနဲ့ မီဒီယာကနေ အော်လိုက်ကြတာ မကြားချင်အဆုံးဘဲ၊ တကယ်လည်း တိုက်ပွဲဖြစ်ရော ပျောက်လိုက်တာ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် အတိုင်း အစ ကို ရှာမတွေ့တာ။ ဒီတစ်ကြိမ် နဲ့ဆို နှစ်ခါ ရှိပြီ၊ မနှစ်က တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန် လည်း အခုလိုဘဲ။ ကိုယ်ပြည်နယ်အရေး ကို မကြောက်မရွံ နဲ့ တာဝန်မယူရဲဘူးဆိုရင် နုတ်ထွက်လိုက်။
Reply myanmar January 5, 2013 - 12:15 pm ဟေ့ဂေါက်ဂက် မင်းကရော ဘယ်မှာ မိုက်ကိုင်နေလဲ.ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တာကပြည်သူတွေလေ။ ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တာက ဦး ဇောင်းဟရား ပါ
Reply non-stop January 11, 2013 - 1:57 pm ကိုmyanmar ပြောတာမှန်ပါလေ့ဂျာ ပြောလိုက်။